भूत हुन्छ या हुदैन ? यस्तो छ रहस्य - आजकोNepal
भूत हुन्छ या हुदैन ? यस्तो छ रहस्य
admin २ कार्तिक २०७७, 6:12 am
हामीले टिभी, चलचित्र, सिरियल आदिमा धेरै भूत देखेका छौं। कतिपयलाइ राति डरले छटपटीन फिल्मकै भूत हेरे पुग्छ। सामान्यतया यस्तो तेतिखेर हुन्छ जब हाम्रो मस्तिष्कले नाट्य भूतलाइ साचो मानेर बस्छ। खास गरि बालबालिकाहरुको मस्तिष्कमा यस्ता नाट्य भूतको छाप रहन्छ । दिनमा भूतको फिल्म हेरेका कतिपय बालबालिका राती त्यै भूत सम्झियर निदाउन नसक्ने हुन्छन।
हामीले भूतलाइ कतिपय कथा, किस्सा, घटनाहरुमा पनि भूत, किचकन्या आदिको बारेमा सुनेका छौं। कतिपयले साचैको भूत देखेको दावी गर्छन। कतिपय घर, वन, खोला आदि “हन्टेड” ठाउबाट पनि परिचित छन्। अब यहाँ प्रस्न उठ्न सक्छ के कथामा सुनेजस्ता, फिल्ममा देखे जस्ता भूत साचैको हुन्छन् त? उत्तर हो नाइँ। जस्तै अधिकांस व्यक्तिहरुलाई अचार वा चटपटे जत्ति पिरो भयो उत्ति मिठो लाग्छ त्यस्तै फिल्म, सिरियल आदिमा भूत जत्ति डरलाग्दो भयो उत्ति दर्शकलाइ हेर्न मजा आओस भनेर काल्पनिक भूतहरुमा मसालेदार स्वादहरु राखिएका हुन्छन।
भूत भनेको के हो ?
हामीले सामान्यत् मरेका मानिसलाइ भूत भनेर चिन्ने गर्छौं । हत्या गरिएका व्यक्ति, आत्महत्या गरेका व्यक्ति, कुनै दुर्घटनामा परि अकालमै ज्यान गुमाएका व्यक्ति आफ्नो अधुरो इच्छा पुरा गर्न वा आफ्नो हत्यारा पत्ता लगाउन भूत बनेर आउछन भन्ने भ्रम भूतलाइ विस्वास गर्नेहरुमा रहेको पाइन्छ तर यसलाई विज्ञानले मान्दैन। सामान्य लोगिक लगाउने हो भनेपनि यो संसारमा असंख्य मानिसहरु हत्या, आत्महत्या वा दुर्घटनाबाट मरिरहेका हुन्छन् , तेसो भए त बाचेका मानिस भन्दा धेरै त भूतहरु यो पृथिवीमा हुन पर्नी होइन र ? किन सिमित ठाउँमा र सिमित मानिसहरुलाई मात्र भूत देखिन्छन ?
फ्रान्सका एक चर्चित मनोचिकित्सक प्रा.ड़ा ग्राव्हियल मार्टिनका अनुसार” भूत वा कुनै पनि असामान्या अदृस्य शक्ति हाम्रो मस्तिष्कको उपज हो।” उनले आफ्नो एक लेखमा भनेका छन् “जब मानिसले आफु वरपर वा आफुसंग केहि असामान्य घटना घटेको महसुस हुन्छ तब हामीलाई “हेलिसुनेसन” अर्थात भ्रम भएको हो। यदि तेस्तो भ्रम बढ्दै गयो भने त्यो मानसिक बिमारीको संकेत हो।” हालाकी उनको यो भनाइको आलोचना गर्नेहरु पनि धेरै रहेछन। उनको उक्त भनाइले नास्तिकवादलाइ प्रोत्साहन गरेको र इश्वरको अस्तित्वलाइ समेत अस्वीकार गरेको आरोप लाग्ने गरेका छन्।
बेलायती वैज्ञानिक जर्ज डेविसले भूतप्रेत जस्ता कुराहरुको वास्तविकसंग कुनै सरोकार नहुने बताउछन्। भौतिक विज्ञानको नजरमा भूत प्रेत जस्ता कुराहरुको कुनै अस्तित्व छैन ।
कतिपय पूर्वीय दर्शनका ज्ञाताहरुका अनुसार भूत भनेको बितेको कुरा हो। त्यसैले भूतको अस्तित्व बितेको समय संगै हराएर जाने भएर मरेका मानिसलाइ भूत भन्ने गरिएको हुन सक्ने आकलन गर्छन
तेसो भए भूत हुदैन त?
“अह: भूत भन्ने कुनै कुरा हुदैन” एक भारतीय आध्यात्मिक योगीले आफ्ना अनुयायीहरुलाई उनीहरुको प्रश्नको जवाव दिदै भन्छन।
कतिपय “प्यारानोर्मल अनुसन्धानकर्ता”हरुको तर्क अनुसार मानिस मरेपछि जब उसको आत्मा सरिर छोडेर निस्किन्छ तब कतिपय अवस्थामा उक्त आत्मा लामो समय सम्म भौतिक सरिर वा जीवित व्यक्तिहरुको वारीपरि रहन्छ। उनीहरुको यो दावीमा कतिको सत्यता छ थाहा छैन तर आत्मा वा योगीक भाषामा भन्नु पर्दा प्राणसक्तिको चाइ अस्तित्व हुन्छ जस्लाइ भौतिक विज्ञानले पनि नकार्न सक्दैन।
हाम्रो शरीर पंचतत्वबाट बनेको छ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु र आकाश जस्मा पृथिवी भनेको माटो जसबाट हाम्रो मांसपेशी, छाला हड्डी आदि बनेका छन्, जल भनेको शरीरको तरल पदार्थ जस्तै रगत, अग्नि भनेको हाम्रो शरीरको तापक्रम र वायु भनेको हावा जसको सहाराले हामि बाचेका छौ। जब मानिस मर्छ र उसको दाहा संस्कार गरिन्छ तब पृथिवी तत्व समाप्त हुन्छ अर्थात शरीर भस्म हुन्छ, शरीर नै नभएपछि जल तत्व रहन्न बाकि रहयो अग्नि जुन मानिस मरेपछि हराएर जान्छ बच्यो वायु र आकाश। कतिपय विद्वानहरुले के तर्क गर्छन भने आत्मा त्यहि वायु र आकाश तत्व मिलेर बनेको हुन्छ।
उनीहरुको तर्कलाई मान्ने हो भनेपनि अग्नि, वायु र आकाश तत्वले जीवित मानिसलाइ कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन किनकि स्वासप्रस्वासको वायु र आकाश तत्व देखा पनि पर्दैनन् नत उनीहरुमा अरुलाई हानि गर्ने सामर्थ्य रहन्छ। कतिपयले आत्मामा अग्नि तत्व पनि हुने तर्क गर्छन, यदु तेसो हुन्छ भने पनि एक स्वस्थ जीवित व्यक्तिको शरीरको तापक्रम ३८ डीग्री फरेन्हाइट हुन्छ जुन उसको पेटमा बड्डी मात्रामा ३८ देखि ४० डिग्रि सम्म रहन्छ खाना पचाउन। उक्त तापक्रम पनि हानिकारक हुदैन।
हाम्रो पूर्वीय दर्शनले आत्मा अमर हुने कुरामा विस्वास गर्छ र भौतिक विज्ञानले पनि शक्ति कहिल्य मर्दैन भएर भन्छ। तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भूतमा विस्वास गर्ने छुट किन पनि दिदैन भने एक आत्मा एउटा शरीर त्याग गरेर अर्को जीवन वा जन्ममा जान पर्ने हुनाले उसलाई मरिसकेपछि पनि भौतिक संसारमा धेरै समय रहने अवस्था हुन्न। त्यसैले कतिपय व्यक्तिहरुले प्रेत वा भडकिएको आत्मा भन्ने मिथ्या हो।
अन्त्यमा, भूत प्रेत जस्ता कुराहरु हाम्रो मस्तिस्कमा हुन्छन बाहिर होइन। मनोचिकित्सा भन्छ यदि कुनै कुरा तपाइको मन मस्तिस्कमा गहिरो गरि बस्यो भने तपाइँले त्यहि देख्नु हुन्छ जे तपाइको मस्तिस्कले सोचेको छ न कि जे देखिन्छ । त्यसैले त राति डराउने मानिसहरुले अध्यारोमा रस्सीलाइ सर्प र कपडालाइ भूत देख्ने गर्छन।